Ahoana ny fomba famongorana manontolo amin'ny vatana dia mety hisy fiantraikany lehibe eo amin'ny hoditrao - Fialam-boly
Home » Blog » Ahoana no mety hisy fiantraikany lehibe amin'ny hoditrao ny vatana manontolo?
Loharanon'ny sary: Pexels.com
Isan'andro, ny olona dia voan'ny poizina amin'ny rivotra, ny sakafo, ary ny rano izay sotroiny, fa tsy manadino ny vokatra azo avy amin'ny hoditra isan'andro. Ireo toxine ireo dia ahitana pestizides, plastika, ary solvent. Na dia azonao atao aza ny manandrana manao izay rehetra azonao atao mba hifehezana ireo zavatra ireo, dia tsy azo atao mihitsy ny manalavitra azy rehetra.
Ny vatanao dia miavaka sy manana taova izay miasa andro aman'alina mba hanalana vatana sy hanaisotra ny poizina izay mety ao anatin'izany. Ny hoditra no lanja manan-danja indrindra ary tsara indrindra amin'ny fanalana vidy ny vatana. Miaro ny vatana koa izy ary manimba ny zavatra rehetra. Mariho fa ny hoditra dia iray amin'ireo taova voalohany mba hampisehoana ny vokatry ny toaka eo amin'ny vatana. Ireto ny sasany amin'ireo tombontsoa azo avy amin'ny fanesorana feno vatana ny hoditrao.
Isaky ny mahatsikaritra ianao, ny vatanao dia mamoaka hatramin'ny 10% ny toaka rehetra ao amin'ny vatanao. Noho izany, na dia mandritra ny ny fanivanana holistic holotoana, mila miantoka ny fiasanao ianao mba hahafahan'ny vatanao mamoaka haingana ny poizina. Ny hoditrao dia hanampy ny sisa amin'ny vatanao mba hialokaloka. Ny fanadiovana ny dite ho an'ny cayenne dia fantatra amin'ny fampanjariana anao mihoatra noho ny fikajiana fanindronana hafa.
Rehefa misafidy ny drafitry detox ianao, dia azo antoka fa manampy azy koa ny manala ireo poizina izay mety eo ambanin'ny hoditra. Ireo toxins ireo koa dia ahitana ny vokatra tsara tarehy izay miteraka fisiahana. Hahafinaritra kokoa ny hoditra manjelanjelatra aorian'ilay process de detox satria ny vatanao dia ho madio sy salama.
Raha tsy misy poizina maro ao amin'ny vatanao, ny rafitra fiarovananao dia afaka manome ny fiarovana ilaina. Ny hoditra no mahatonga ny fanararaotana indrindra amin'ny asa atao isan'andro. Ohatra, misy fotoana izay tsy ahafahanao manenjika ny tongotra amin'ny latabatra na manapaka ny tenanao mandritra ny sakafo. Mety ho mampidi-doza ny ratra nahazo azy ireo, na dia kely aza ny fahitan'izy ireo, raha ambany ny tsy fahampian'ny vatanao.
Ny ratra amin'ny hoditra dia mora amin'ny bakteria noho ny fiparitahan'ny bakteria satria miharihary io taova io. Noho izany, ny drafitra dehibenao dia manatsara ny rafi-pandam-baravanao mba tsy ho sarotra loatra ny fahasitranana toy izany, na dia tsy misy dokotera aza. Ankoatra ny drafitry ny detox, mila manova tanteraka ny fomba fiainanao ianao ary miantoka amin'ny fampiasana fitaovana maotina izay hanampy amin'ny fisorohana ny aretina tsy hiditra amin'ny vatanao. Ny hoditra dia mampiseho ny famantarana voalohany ny fahasalamana. Midika izany fa tokony hisoroka aretina ianao amin'ny fidirana ao amin'ny vatanao amin'ny lafiny rehetra. Beyonce dia ohatra tsara ny tombontsoa mahafinaritra amin'ny fanapotehana ny vatana manontolo.
Ny ankamaroan'ny olona dia mihevitra fa ny lanjany fotsiny dia misy fiantraikany eo amin'ny taova anatiny. Na dia izany aza dia misy fomba maro ahafahana mijery ny hoditrao koa. Ho an'ny iray, raha manangona lanja loatra ny vatanao dia lasa insuline manohitra izany. Rehefa mitranga izany, ny hodinao dia manomboka manamboatra paty malama izay fantatra amin'ny anarana hoe acanthosis nigricans. Matetika izy ireo no mitranga rehefa misy vala ny hoditra na aiza na aiza. Ny fitomboan'ny vala eo amin'ny vatanao koa dia mahatonga ny hoditra hamandoana ny fahamendrehana, izay lasa bakteria fiompiana. Ireo faritra ireo dia mety ho lasa kisendrasendra ary manomboka manindrona, ka mahatonga anao ho mora tezitra amin'ny aretina.
Lanja loatra koa Mampitombo ny fahafahanao mamolavola marika maromaro, izay tsy mahafinaritra loatra. Azon'izy ireo atao ny mihady mora foana. Ireo fepetra ireo dia azo sakanana raha mihazona lanja salama. Ny fanadiovana ny vatana manontolo dia manome fahafahana anao handresy haingana be. Mila mitandrina ianao mba hitazona ny lanjan-tsiramamy mba ho madio foana sy hoditra foana.
Mandratra ny vokatry ny fahanterana
Ny fahanterana dia zavatra tsy azo sakanana. Na izany aza, raha afaka mianatra zavatra avy any Hollywood ianao dia misy ny zavatra toy ny fahanterana. Alohan'ny handrenesanao ny taolanao rehefa mitsangana ianao, dia hahita ny fahanteranao eo amin'ny hodinao. Hihena ny elasticité, hihamangatsiaka, ary hanomboka hikoropaka mihitsy aza. Miharatsy ny hoditrao rehefa mandeha ny taona. Ny fanesorana metaly mavesatra sy radika maimaim-poana avy amin'ny hoditra dia mahatonga azy tsy hihantitra aloha. Amin'ny farany, hahatsapa ho malefaka sy malefaka izy.
Izany koa no fomba tsara ahafahana manadino ny hatezerana amin'ny fandrosoana. Amin'ity fanadiovana ity sy ny fitsaboana spa tsara dia hampihena ny hoditrao ianao ary hanatsara ny fifamoivoizana. Ericka Baldwin dia mahomby Nihantitra ny fahanterana tamin'ny fampiasana ny detox feno.
Ny vavanao dia tsy ny ampahany fotsiny amin'ny vatana izay mamokatra fofona avy amin'ny sakafo ananananao. Ny hodi-tanao koa dia mikoropaka toy ny zavatra napetraka ao amin'ny vatanao. Ohatra, ho hitanao fa ny olona misotro toaka be sy rano kely dia mahatsapa ho maranitra mahatsiravina. Ny olona izay misotro rano be dia be dia be fa ny fofona dia tsy azo ampitahaina. Raha zatra mihinana tsy marim-pototra ianao, dia misy ny fahafaha-miteny amin'ny olona amin'ny fofony amin'ny hoditrao. Manampy amin'ny fanesorana ireo fofona mahatsiravina ireo ny detox ary mamela ny hoditra hijerena sy manify vaovao.
Ny antony lehibe tokony hialanao dia ny fanamafisana ny hatsaran'ny fiainanao. Ny fizotry ny detox dia ahafahanao mahatsapa tsara ny momba anao ary manatsara ny fomba fijerinao na tsy misy makiao. Hahatsiaro ho maivana kokoa ianao mandritra ny andronao.
Febroary 2, 2018 Admin Blog Tsy asian-teny